N'ihi Gịnị Ka M Ga-esi di na Ya mere Young? — njem Lee - Official Site
N'ihi Gịnị Ka M Ga-esi di na Ya mere Young?
Ụnyaahụ m mere ka a mbubreyo n'abalị kwụsịtụ na ụlọ ahịa jidere ihe ole na ole na m nwere a-akpali nnọọ mmasị mkparịta ụka na onye okwu ugwo. Anyị mere ka obere okwu dị ka ọ scanned m ihe, na mgbe ahụ na o nyere m kaadị mwepụ ego ma m gwara ya na nwunye m na-ama nwere otu. Nke ahụ bụ mgbe mkparịta ụka nwetara fun. M maara nke a na-akparịta ụka nke ọma n'ihi na m na nwere ya ọtụtụ ugboro tupu. Ọ na-aga ihe dị ka ...
onye: Kedu!? Ị na-lụrụ di na nwunye?
Me: Yeah m na a di na nwunye ruo afọ abụọ na ọkara ịtụnanya afọ.
onye: Afọ ole ka ịdị? Ị dị ka nwa ọhụrụ.
Me: Na na na iri abụọ na atọ.
onye: Ị na na na otú eto eto! Gịnị mere na ụwa ị ga-eme ka?
Me: Gịnị mere ọ bụghị m?
na 2009, M lụrụ di na sonso iwu na-ejisike na-akwanyere ùgwù afọ iri abụọ otu afọ. N'oge m na-akpa akpa, njikọ aka, na obere alụmdi na nwunye, M na a gwara oge na oge ọzọ ajụjụ ka, "Gịnị mere ọdọ otú eto eto? Kedu ihe bụ rosh?”, na m onwe onye ọkacha mmasị, "Asi na i chere na-amasị ndụ gị!”
Ụfọdụ n'ime folks arịọ ajụjụ ndị a bụ ndị bịara abịa, ma ụfọdụ ndị ezinụlọ. E m crazy ka ọdọ na ndị dị otú ahụ a "-eto eto” afọ?
Ọma ka m nye gị ihe atọ m kpebiri na m ka ọdọ mgbe m mere.
1. M zutere a akabakde Abasi
Dị ka ihe iri na asatọ afọ Freshman na Bible na mahadum, M na ọ bụghị ifịk ifịk na-achọ nwunye, ma Chineke si cho ịme m ka m bụ nwa agbọghọ mgbe obi ya. Ọ mara mma, ma ihe ọ hụrụ n'anya Jesus. Ọ maara na ọ bụ onye mmehie na mkpa nke àmàrà, na o nwere a umeala n'obi, a pụrụ izi obi. Anyị bịara ịbụ akụkụ nke otu chọọchị, otú ahụ ka m wee na-ele ya na-eje ozi, -eto, na ikwesị ntụkwasị obi nye ya oge ka ndị ọzọ. M wee malite ịgwa m n'ime gburugburu banyere ya. Ndị enyi m, mentors, na ndi ozuzu aturu niile kwetara – ọ bụ Chineke na nwaanyị. M nwere ike ịhụ onwe m na-eje ije na ya na-ahụ ya n'anya n'ihi na ike nke ndụ m.
2. M dị njikere
Site n'oge a ka m chewe banyere eziokwu nke alụmdi na nwunye na ihe ọ pụtara-etinye onwe gị na mmadụ maka a ndụ. Ajụrụ m onwe m ma ma ọ bụ na m bụ tozuru okè na-ahụ ezu. M gwupụtawo Akwụkwọ Nsọ na echiche banyere ibu ọrụ ndị a na di, na-ekwu ka di na nwunye ndị enyi na mentors. Mgbe ọtụtụ nke ikpe ekpere na mkparịta ụka, m mentors na ndi ozuzu aturu na chọọchị m gwara m na ha chere na m dị njikere inweta ya. M na-atọ ha ụtọ. Ma m agaghị achụ ya ma ọ bụrụ na m chere na m bụ adịghị njikere n'ụzọ ime mmụọ na-edu ya, -elekọta ya, na ka ịbụ onyeisi ezinụlọ na-.
3. Alụmdi na nwunye bụ ngọzi
Na mbụ m dị ka m nwere na-egosi na naysayers na-alụ di-eto eto bụ mma mgbe ụfọdụ. Ma mgbe m lere anya ya n'Akwụkwọ Nsọ ahụghị m stof ka, "Alụmdi na Nwunye nhata ọnwụ! Ịgbara ya ọsọ!” ma ọ bụ, "Tinye alụmdi na nwunye anya ruo mgbe ị nwere ike ghara itinye ya anya ọ bụla ogologo,” ma ọ bụ, "Naanị-alụ mgbe ị na emewo agadi iji nụ ụtọ ndụ,” ma ọ bụ, "Play ubi maka mgbe na mgbe ahụ bulie kasị mma.”
Kama m hụrụ iwu ka, "Gbaanụ ọsọ okorobịa agụụ ihe ọjọọ”, na m na-agụ amaokwu ndị dị ka Ilu 18:22 na-ekwu, "Onye Chọtara nwunye okụt a ezigbo ihe ma obtains amara site na Jehova.”
Ya mere, mgbe ndị na-ekwu, "Gịnị nwere ị ka ọdọ otú eto eto?” ọhụrụ m omume bụ, "Ị na-arịọ na-ezighị ezi ajụjụ.” M na-eche na-akpata ajụjụ bụ ọtụtụ ndị chere na alụmdi na nwunye steals ihe n'ebe m, dị ka ma ọ bụrụ na m bụ nwa okorobịa a na-egbughị na kwara àjà ịhụnanya mgbe ọ nwere ike ji mee ihe maka ukporo ụtọ na flakiness.
Alụmdi na nwunye bụ a mara mma onyinye si n'aka Chineke! Ọ bụ ụzọ isi amara. M hụrụ a nwunye, na na bụ ihe dị mma. M ghara kwetara ihe a Baịbụl na-ekwu, yipu Chineke ogaranya ngọzi dị ka ogologo dị ka ị pụrụ. Kama m na-agwa enwe Chineke ezi onyinye na-elekọta ụlọ ha n'ihi ebube-.
Nke a abụghị na-ekwu na onye ọ bụla kwesịrị ọdọ mgbe m mere. Ọ ga-arahụ ọjọọ ma m ga-agbalị na di na nwunye tupu m dị njikere. Ụfọdụ n'ime anyị mkpa inweta na-eto ọzọ, na ndị ọzọ nke anyị kwesịrị ikpe ekpere maka afọ ojuju ma na-atụkwasị Jehova na Ya oge. My mgbaru ọsọ bụ na-ekwu na ndị na-eto gị ka ọdọ, ndị ọzọ dị nsọ ị na-. M nnọọ na-ẹbọhọ echiche ụgha na anyị gbuo oge ịghọ okenye na naanị ọlụlụ anyị ozugbo anyị na-na na iri atọ ma ọ bụ okenye.
Ihe Dị Mma
N'abalị ikpeazụ na twitter onye jụrụ m ma m akwa ụta na-alụ di otú eto eto. My ibọrọ? nnọọ bụghị.
Ọ bụ otu n'ime mkpebi ndị kasị mma m metụrụla. Na na na obi ụtọ karị, ndị dị nsọ karịa m abụọ na ọkara afọ gara aga, na nke ahụ bụ ezi ihe. Achọghị m ime ka o yie ka m ụfọdụ ibu obere anomaly. Amaara m na ọtụtụ folks onye lụrụ di nnọọ ka nwa ma ọ bụ tọọ m. Ha onwe ha kwa wee hụ alụmdi na nwunye dị ka onyinye ha na hụrụ mkpụrụ nke onyinye. M na nwunye m nwere ike na-eto eto ugbu a, ma na m na-ekpe ekpere maka amara n'anya nwunyem ruo mgbe ọgwụgwụ nke ndụ anyị. Tupu mgbe ahụ m chọrọ irubere amamihe nke Ilu na 'ịṅụrị ọṅụ n'ihi nwunye m bụ nwa okorobịa.”
Jannon Fitzpatrick • August 19, 2013 na 6:58 Abụ • zaghachi
M nkwanye ùgwù na-adịghị ekweta na Kevin Ferere. I nwere ike na-amaghị ihe ịhụnanya bụ ruo mgbe ị matara na Chineke bụ, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya! The Bible ekwughị ihe ọ bụla banyere ịlụ gburugburu ma ọ bụ mmekọrịta na ndị ọzọ na-ahụ na otu onye. N'ezie, Isaac layed on on Rebecca na maara na ọ bụ onye ya. O mere bụghị ụbọchị gburugburu ma ọ bụ ịgwa Leah ka ma ọ bụrụ na ọ bụ mma ka ọ ga-ama ma ma ọ bụ Rachel bụ n'ezie ihe ọ chọrọ ma ọ bụ.
Na-ekwu okwu si na m ahụmahụ, M mere ụbọchị ndị ọzọ ma na hụrụ ihe ịhụnanya bụ. Ọ bụghị naanị site m mmekọrịta, ma site na nne na nna m’ na ụmụnna nwanyị’ mmekọrịta. Nsogbu bụ, ha na-adịghị mmekọrịta dabeere na Okwu ma ọ bụ Ịhụnanya Chineke na nke ahụ bụ ihe mere ha ji na-arụ ọrụ si. M mere chọta a Chineke na Man, n'ihi ya ọ pụrụ arụ ọrụ ahụ n'ụzọ na ị na-ekwu, MA m obi m nile kwere na ọ bụrụ na m gaara na-echere na-eche nche obi m site ndị ọzọ mmekọrịta na-adịghị ezi na m, M gaara a ka mma ma na-erughị gbajiri ọnọdụ, ka recieve di m si a Chineke na nwaanyị si n'ọnọdụ kama a gbajiri nwaanyị si n'ọnọdụ na ibu na-arụ ọrụ site na.
Ọ dịghị enweghị nkwanye ùgwù bu n'obi, ma m kwere na bụ a n'ụzọ dị ukwuu na-ezighị ezi blanket na nkwupụta na pụrụ n'ezie iduzi-eto eto obi na-na-ezighị ezi direction. (Google ọmụma banyere Chineke na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị vs. Modern dịwara. E nwere ụfọdụ n'ezie ezi stof na e nwere.)
Deborahfatuade • August 19, 2013 na 6:59 Abụ • zaghachi
Nke a bụ awsome
KevinFerere • August 19, 2013 na 6:59 Abụ • zaghachi
Ị na-ama m nri. The Bible nwere ike ikwu ihe ọ bụla ọ chọrọ, ma ị na-na na-enweta ahụmahụ ndị niile ị ga-aga anya nke. Ya na onye ị na-akpọ Chineke na-abịa site a njedebe nke ihe ị na-akụziri ha ma na gị ahụmahụ. N'ikpeazụ, ihe i kweere bụ a nhọrọ, ma ihe ị maara na-amanye site na eziokwu.
na yeah, okwu nwere ike ịbụ a bit general, ma ọ kwesịrị iwere na ọka nke nnu, dị ka ihe ọ bụla.
Lokelani70 • August 19, 2013 na 7:00 Abụ • zaghachi
M na-eji nkwanye ùgwù na-adịghị ekweta na Kevin Ferere.
Nanị ihe na-a pụtara bụ na i mere ka a na akọ na uche mkpebi ka gị ndụ Chineke site n'okwu ya, Bible. ebe, anyị kpebiri ibi ndụ anyị na a Chineke na alụmdi na nwunye, site n'okwu Chineke. Nke bụ eziokwu nke okwu ahụ bụ, otu ga-enweghị nghọta zuru ezu nke a blog ọ bụrụ na Chineke na-adịghị-ebute ụzọ ná ndụ.
Ikpe ekpere maka alụmdi na nwunye nile! Chukwu gozie!
KevinFerere • August 19, 2013 na 7:00 Abụ • zaghachi
M mere mkpebi iji chọta ndị Chineke n'ihi na onwe m, ọ bụghị site ihe onye kụziiri m. Echegbula, M na-adị nnọọ ka ị na.
AC • October 3, 2013 na 5:53 pm •
Achọrọ ka m na-ekwu, i nwere ike ịhụ na Chineke. The Bible kwuru na anyị na-na na nwụrụ anwụ. Ndị nwụrụ anwụ nwere ike ime ihe ọ bụla. Chineke na-enwe anyị.
Oh… M mere wutere Kevin, ị ga-mgbagwoju anya. The Chineke m ka m na-eje ozi abụghị a Chineke nke onwe onye na-achọ. Ichegbu onwe abụghị uche Chineke, ma n'anya eachother dị ukwuu dị ka Ọ hụrụ anyị n'anya na-! Dị ka m dere na mbụ, ibute Chineke ụzọ bụ ihe dị mkpa iji ike ịghọta nke a blog, dị ka gị zaghachi na-egosi m ebe. Ka ihe niile anyị na-ekwu ma na-eme ihe dị Chineke mma. Chineke gọzie na nwere onwe gị ihe dị ịtụnanya mgbede.
Lady Mukete Arnold • August 19, 2013 na 7:00 Abụ • zaghachi
Hahaha, na-achọ, ị ga-ahụ Ya- echeta ihe e kere eke na-ekpughe Ya nwekwara. N'ezie, M Eh-enye gị a na atọ, dị nnọọ bulie Bible ma na-aga atụfu ya dị ka a akụkọ akwụkwọ arịba ama niile na-ekwu ọ na-eme na ọbụna n'isi ha wee, lelee akwụkwọ ndị ọzọ na-atụnyere ndị na-ekwu. Ma maa ị ga-mkpa onye na-akọwa ị somethings, alala azụ kemgbe ị na-a achọ nke eziokwu.
Ọ bụrụ na i kweere na Chineke dị ukwuu dị ka ị na-ekwu na ị na-eme, mere i ji chee na ọ dị mkpa iji gosi na Ya nke ukwuu? M na-adịghị Chineke, n'ihi na Ọ bụ na m. M Ya na Ọ bụ m. Ma m mwute, i nwere ike ghọtara na ike ị?
Delinabini • August 19, 2013 na 7:01 Abụ • zaghachi
ekwetaghị m, olee otú i Chineke na otú ike Chineke-gi ka i n'ezie ike onwe gị ma ọ bụrụ na ị bụ Chineke?
KevinFerere • August 19, 2013 na 7:01 Abụ • zaghachi
My ọjọọ, typo: *M na-adịghị iji gosi na Chineke. *
Ma comment pụtara ihe ọ na-ekwu. Ihe ọ bụla dị n'ime unu, na bụ ihe ị. Atụla egwu na-anabata eziokwu ahụ nanị n'ihi na ị na-akụzi na ọ bụ ihe ọjọọ.
Addis Hunter • August 19, 2013 na 7:01 Abụ • zaghachi
100 % na gị! Mụ onwe m kwa zutere di m na 20 na a afọ mgbe e mesịrị, anyị lụrụ. M nwere ka nwere otu mkparịta ụka na random ala ọzọ, ezinụlọ na ndị enyi na m chọrọ agba gị ume ikwesị ntụkwasị obi nye Jehova na gị mîkemeke nwunye n'ụzọ ọ bụla nke na-discribed na okwu. Mụ na di m ugbu a 30 afọ na mgbe m na-agwa ndị mmadụ na m na na na “obi ụtọ na-” di na nwunye ruo ihe fọrọ nke nta 10 afọ ha ikwoozu!!! “n'ezie”?? Na-eme ka otu adabaghi ​​comments of “imefusị ntorobịa anyị” wdg wdg. Ma, Chineke nwere otú obi ebere na ezi na anyị na m cant ekwupụta okwu otú gọziri agọzi m zutere di m mgbe m mere. Anyị n'anya reminising na anyị na mahadum afọ ọnụ, na-arọ nrọ banyere ihe uku nile na ndụ nwere maka anyị n'ihu! Anyị nwere 2 mma ụmụ agbọghọ na a nwata nwoke na ụzọ (na anyị ji obi umeala kpee ekpere maka nke a afọ na Chineke nyere) , (atually m ruru taa ;-))..na anyị na-couldnt-ọzọ n'aka na ọ bụ a devine n'otu si na Chineke na-ewetara anyị ọnụ.
ndammana, Anyị na-adịghị zuru okè (ọ bụ ezie na ndị enyi m na-eche otú ahụ n'ihi na anyị na-na Na-eche ihu nkịtị ụwa nsogbu nke ekwesịghị ntụkwasị obi, nkwanye ùgwù na mgbe nile na-arụ ụka), ma anyị nwere nghọtahie, ọnọdụ swings, ego dificulties etc, ihe dị iche bụ na anyị adabere n'ebe Chineke na-edu anyị nzọụkwụ, anyị akwanyere ndị ọzọ ùgwù ma na-agbalị kasị mma anyị mgbe ida OKWUKWE, nkwurịta okwu, na-achọ nduzi site na mmụọ nsọ dị ka a di na nwunye na individually..My di bụ ihe kasị pụrụ iche na onye m mgbe zutere na anyị ma na-aghọta na isi ihe na-enweta obi ụtọ ka a na alụmdi na nwunye bụ BỤGHỊ na-eme ma ọ bụ na-azụ ahịa “ihe” mee eachother obi ụtọ ma Ịmara ndị anyị bụ na Christ, esonụ O nyere n'iwu banyere alụmdi na nwunye na-ahụ n'anya ibe unconditionally, n'agbanyeghị nke anyị flaws ma ọ bụ otú anyị nwere ike “na-eche” na oge , maara na OBI ỤTỌ ga-enwe mgbe nile a nwa oge mmetụta uche nke na-aga n'ebe, ma ezi JOY naanị-abịa site na Jehova.
M na-achọ gị na nwunye ruo ọtụtụ afọ agọzi JOY!!!
M unu n'anya music kwa site ụzọ ;)..
Josh • August 19, 2013 na 7:01 Abụ • zaghachi
Ị na-a oké atụ na-eto eto Kraịst, bụ ndị chọrọ inye Chineke otuto n'ụzọ ha si emeso ndị inyom! Daalụ! M nnọọ jikọrọ aka, Abụ 22, na-atụ anya na-eje ozi Chineke, na nwunye ruo ọtụtụ afọ na-abịa!
Johnny_renteria • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
Kwere ya ma ọ bụ ma m lụrụ di na afọ 18. M nọ na ụzọ adịghị njikere ịbụ a di na ego uche na m ama a nna. Ma m dị nnọọ nyere m ndụ ruo Christ na m maara na ndị inyom na-na mụ na ga-abụ onye na-eto eto na m. Mmadụ na-ajụ m otu ihe dị ka nke ọma. M na-ahụ na ọ dị mwute ezie na alụmdi na nwunye na-hụrụ dị ka a ihe ọjọọ. taa, M na-eche banyere na na m bịara ọgwụgwụ na ndị mmadụ nwere nnọọ ọdịmma onwe na echiche nke na-ewere ọrụ nke onye ọzọ ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume. Alụmdi na nwunye bụ bụghị banyere mgbe na ihe mere i ji lụrụ ma banyere onye na-eche nanị gburugburu na alụmdi na nwunye. Na ọ ga-Kraịst…
Deborah • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
i na-eche ị r nri trip..i nwere a frnd onye lụrụ @ 19 (ha hv lụrụ 4 6 yrs Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ)n lkng @ ya ugbu a, anyị na-aghọta iche site ịnakwere Kraịst ná ndụ ya dat na-d mkpebi kasị mma ọ ebi mere….ezie na i ga-ekweta m njikere 2 nweta married..it scares m cos Achọghị m 2 ga-ekirikarị 2 d na-ezighị ezi onye 4 d ọzọ nke ndụ m ma m maara na Jizọs ga-dịghị mgbe ka m meekwa ka d na-ezighị ezi nhọrọ…nwekwara i mgbe ụfọdụ na-eche y ọdọ mgbe i na-niile m chọrọ site Jesus n o nwere ike mgbe brk m hrt?….Ua mkpebi ziri ezi n i gv u ịmeela 4 nke!:)
MNM103 • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
Nke a n'ezie kụziiri m ọtụtụ. Ma ọ bu oké ikpe nwunye gị n'akụkụ nke ya oke!
Lance Peterson • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
Awesome. My nwa-lụrụ 2 1/2 afọ gara aga na a magburu Chineke nwaanyị na ha bụ ndị ma mfri eke agadi nke 19. Your akụkọ chetaara m ha.
Brandon Clements • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a Njem! M lụrụ di na 22 na m nnọọ n'anya m alụmdi na nwunye. Ọ na-akpa ọchị n'ihi na m dị nnọọ nwere a yiri na mkparịta ụka a gas ojii na-eje ozi banyere a n'ọnwa gara aga. Ọ wetara dum, “Gịnị mere di na nwunye mgbe ị nwere ike nke mmiri ara ehi maka free?” ajụjụ na obi m mebiri maka ya. Mgbe ahụ, m wee na-agwa ya na nwunye m bụ a ehi–na ọ bụ egwu na m hụrụ ya n'anya.
Daalụ maka nkekọrịta!
Travel • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
loool na ị na-akpa ọchị = D
Louib2001 • August 19, 2013 na 7:02 Abụ • zaghachi
Toonụ Jehova n'ihi na ị na nwanne gị mîkemeke nwunye ị lụrụ n'okorobịa. M ekpe ekpere ka Jehova ga-awụpụ amara nọgidere ofụri ndụ gị, n'ihi na i rubere isi okwu ya. m 28 ma e-lụrụ di na nwunye ugbu a fọrọ nke nta ka afọ abụọ na mụ na nwunye m nwere obi ụtọ n'alụmdi na nwunye na a ọmarịcha 10 nla agadi na nwa. M mgbe niile chọrọ ka ọdọ tọrọ, ma m kwere na ọ bụghị oge ma m ruo mgbe Chineke mere ka m ezi ihe fọrọ nke nta 5 afọ ndị gara aga (na-kpọmkwem anyị zutere na ụbọchị anyị ọkọdọ mụrụ ọzọ 31 Dec 2006). M na-amaghị na anyị ebe kara aka na-abụ ọnụ ka m were ya dị ka ihe nkịtị nwanna nwaanyị ụka. M na-etinye uche m uto ime mmụọ, ma afọ atọ gara aga m meghee anya na ndị fọdụrụ dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụ Setan burukwa maka ndị mmadụ ghara ịdị na-lụrụ di na nwunye, nke mere na ha ndụ na mmehie na anyị na-ama ihe ga-eme. Ọ bụ na anyị na-ele anya na ọnụego nke ịgba alụkwaghịm na ahụ taa? Olee banyere ụmụnna ndị nwoke na nwanne fornicating na chọọchị, n'ihi ihe otu dictates.
Ọ bụrụ na anyị na-ele anya na otú anyị obodo na-ejupụta na-eto eto ime ihe ike taa, na anyị na-a oge na-eche echiche nke ụfọdụ ndị na-akpata? The oge nwoke mgbanwe Ụkpụrụ Chineke maka okirikiri godị niile a dara iche. Ọbụna ndị nne na nna na-ignorantly akwalite okirikiri godị site na-akụda ha na ụmụ ha na-alụ di na-eto eto (na afọ nke nchegbu o doro anya na). Ihe mere na m aguputa”ị chọrọ iji nweta akwụkwọ, ma eleghị anya, mgbe i rụchaa nna unu ukwu na-enwe a ezigbo ọrụ, mgbe na-amalite na-eche banyere alụmdi na nwunye”. Na ụda maara ihe ọ bụ na ọ ? Ya mere, ihe na-eme mgbe gị Christian nwa na-aga na mahadum na mgbe na-akpali na ya na nwa na-enweghị / girl enyi onye ma Christian ma ọ bụ ndị na-abụghị?
Biko adịghị na-m na-ezighị ezi(nke ahụ bụ nnọọ ihe ụfọdụ m na-abịa gafee), n'ihi na e dere n'elu-adịghị emetụta niile. Education dị ezigbo mkpa ka onye na-enweta ihe ọmụma n'ihi na ha na nwoke na ọrụ ya mere, ha nwere ike na-arụ ọrụ na-enye ha ga-eme n'ọdịnihu ezinụlọ etc, ma na alụmdi na nwunye wont kwụsị onye si ịga nke ọma na ihe mgbe ebe ke ndụ mmadụ họọrọ iso, dị ka a okwu nke eziokwu a alụmdi na nwunye n'ozuzu na-akwalite uto i.e oké ozi, ezi heath, akụ na ụba na ndepụta na-aga. Cheta abụọ na-aghọ otu anụ ahụ na nwere ike ịchụ 10 000 Chaị, na pụtara na nkwekọrịta ihe mgbe ha na-arịọ Chineke ikwesị ntụkwasị obi na ha ga-abịarute, egwu…..
Na nso ga-amasị m na-egosi na anyị bụ ndị Kraịst na-amalite na-akụziri anyị na ụmụ anyị na a na-eto eto na mkpa nke mbụ dị ndụ n'ihi na Chineke na abuo mkpa nke alụmdi na nwunye( ndị na-na na e nyere onyinye) nke mere na ha too, na-na-amasị Chineke na mpaghara ebe a. Ọzọkwa mere nke ọma nwanne m nwoke na ndị niile na ndị bi na okwu Chineke. -anọ gọziri agọzi.
Anna • August 19, 2013 na 7:03 Abụ • zaghachi
Nke a n'ezie gwara m okwu. na na na 21 na a mmekọrịta na agaghị m agwa gị otú ọtụtụ ugboro m na a gwara na m “etorubeghị-eche na ihe na-edinara ala”, M ga-echere iji “ndụ ndụ mbụ”, gụsịa akwụkwọ na iru a ọrụ tupu m tinye mbedo / nwunye. Ị nwere ihe dị ịtụnanya na egwu na-agba akaebe. M na-achọ gị na nwunye a ndụ nke ngọzi na obi ụtọ ọnụ!
amaghị aha • August 19, 2013 na 7:03 Abụ • zaghachi
m 20 na mgbe ke a mmekọrịta ka m na-adịghị ga-lụrụ di na nwunye site na 21 ma m maa akwanyere gị mgbagha. M mgbe niile nwere mindset “onye ọ bụla ya onwe ya”. Echere m na ị na nwunye gị ga-maa-aga n'ebe dị anya na m nnọọ mpako nke ihe ndị ị were tupu alụmdi na nwunye. Ọ anya dị ka unu abụọ were committment kpọrọ ihe nke ukwuu, nke m akụ.
Tony Doyley • August 19, 2013 na 7:03 Abụ • zaghachi
Nnọọ gọziri agọzi ka na-agụ gị blog banyere alụmdi na nwunye na nwata. My nwunye lụrụ di mgbe 18 na anyị na a na-eji obi ụtọ di na nwunye ruo 10 afọ ugbu a. N'aka na anyị na-na na nwere ụfọdụ lee njem, ma m kwere Chineke na-eduzi anyị iji nwayọọ nwayọọ na a niile afọ na ugbu a na anyị siri ike karịa mgbe ọ bụla. Daalụ maka gị na-eju àmà.
KLE Photography • August 19, 2013 na 7:03 Abụ • zaghachi
Congrats gị na-eto eto di na nwunye! Mụ na di m na-ebe otu ihe mgbe anyị lụrụ 8 afọ gara aga na 20 afọ! Ya mere, anyị maara kpọmkwem ihe ị na-aga site na! Ndị mmadụ chere na anyị lụrụ n'ihi na m dị ime (Abụghị m) ma ọ bụ n'ihi na ọ bụ ihe iwu na-akwadoghị ọbịa (ọ bụ onye amaala Amerika). Anyị na-adịghị nwere ọtụtụ ndị enyi anyị anyị nkuku dị ka ha na-eme otu ihe. Ma ugbu a, na 28 ha na-abịa na gburugburu na-agbalị “nwudo.” Obi dị m ụtọ na Chineke gọziri m na di m n'agbanyeghị afọ ole m. Chineke na-agọzi, ma nke unu!
BTW Anyị na-ebi DMV ebe! (MD) ma eleghị anya, anyị niile nwere ike izute ma ọ bụ na-aga chọọchị ọnụ! Anyị ka na-enweghị di na nwunye enyi akpa ọchị.
KevinFerere • August 19, 2013 na 7:03 Abụ • zaghachi
Echeghị m na ihe ọ bụla a na-zuru ohi ị, ya bụ ihe ị na-enye elu. Ọ dị jụụ nwere Ọdịdị na Bible, ma, ọ bụ gị na-agwa gị ndụ, bụghị a akwụkwọ; n'agbanyeghị nduzi ọ na-enye.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịja mma eke mere na-eto eto, ma akụkụ nke na “okorobịa abịa” bụ mmụta na-eto eto ị ga-esi si nzute na mmadụ na-ekere òkè dị iche iche ndị inyom. Ịmụta ihe ị na-amasị na-adịghị amasị ime, ahụ, ma na-eche; kama gị akporo a ka ejedebeghị naanị otu onye.
Ị gaghị ekwu n'ezie ị maara onye ị bụ na ihe ị, ma ọ bụ ọbụna ihe ị chọrọ n'ezie, ma ọ bụrụ na unu na-adịghị interacted ma nke ukwuu na ndị inyom ndị ọzọ ha na-egosi na unu. Ị na-amaghị ihe Ịhụnanya bụ ọ bụrụ na ị na-amaghị ihe ọ bụ.
ọbịa • August 19, 2013 na 7:03 Abụ • zaghachi
Ị adịghị mkpa ịmata ihe Ịhụnanya adịghị ma ọ bụrụ na ị maara ihe Ịhụnanya bụ. Olee ihe ị ga-amarakwa ma ọ bụrụ na onye na-enye gị a adịgboroja $100 ụgwọ ọ gwụla ma ị maara ihe n'ezie $100 ụgwọ anya dị ka. E nwere nanị otu ezi $100 ụgwọ, dị nnọọ na-amụ na na ị nwere ike ịgwa mgbe onye na-enye gị a adịgboroja. The otu na ịhụnanya. E nwere ọtụtụ adịgboroja si n'ebe, ma ọ bụrụ na ị maara ihe n'ezie bụ, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịnọ na adịgboroja. Ebe ọ bụ na Chineke bụ ịhụnanya, ihe ọ bụla adịghị asọpụrụ Chineke nwere ike ịbụ ịhụnanya.
KevinFerere • August 19, 2013 na 7:04 Abụ • zaghachi
N'ihi ya ị ga na-akpa gburugburu na-ezukọ na-enwe mmekọahụ na ndị ọzọ. My ebe kpọmkwem. Gịnị bụ-adịghị asọpụrụ Chineke bụ nke onye. Ị nwere ike na-agbalị-agbasoru iwu n'isi banyere ya n'ihi na ọ bụ ọdịdị anyị na-eme otú, Otú ọ dị, anyị ga-ahapụ ndị a ideals ịbụ na e nwere bụ nke ukwuu na agba ntụ ebe gburugburu na onodu.
Angeldoll1 • August 19, 2013 na 7:04 Abụ • zaghachi
M na-ekwekọrịtaghị na gị okwu na-enwe mmekọahụ na ndị ọzọ- STD si, AIDS na ịtụrụ ime ọkwà, bụ ndị na-esi nke mmekọrịta dị otú ahụ. Ọ bụrụ na onye nāchu mmekọrịta dị otú ahụ, ha ga-amụta banyere kwesịrị ekwesị nkwa na miri na nke ime mmụọ akụkụ nke ịhụnanya kama abịa. Ọzọkwa m na-ekwekọrịtaghị na gị echiche banyere-akpa gburugburu tupu ị chọrọ ime n'ihi na “-akpa gburugburu” abụghị a mkpa ịmata a nwunye si a nonspouse. Nsọpụrụ Chineke chọrọ ịlụ / mkpakọrịta nwoke na nwaanyị e mere maka ụmụ mmadụ dị ka e sere na Bible ebe enwe mutiple mmekọ, enwe random mmekọahụ bụ àgwà nke ụmụ anụmanụ.
AJ • October 3, 2013 na 3:46 pm •
Angeldoll1it bụ ezigbo ghọgbuo nke ị na-eche na ihe niile na-abụghị di na nwunye inwe mmekọahụ bụchaghị na-eduga ná “STD si, AIDS na ịtụrụ ime ọkwà”… ma N'ezie, ị ga-amaghị na ọ bụrụ na ị ẹka oge iji nweta gị isi nke gị uzuzu uzuzu ochie akwụkwọ ma nweta ụfọdụ ahụmahụ ná ndụ.
Ị anya na ọ na-ezighị ezi. Ọ bụrụ na ị na-na na tozuru okè na amamihe ga-ị ga-aga banyere ya n'ụzọ ziri ezi. Ka ị na-ezere ihe, na nso ị na-abịa ya. Elekwasị anya na positives na nke ahụ bụ ihe ị ga-esi. Ma nke N'ezie okpukpe gị anaghị akụziri unu na.
Josh • August 19, 2013 na 7:04 Abụ • zaghachi
“Greater ịhụnanya nwere na ọ dịghị onye karịa nke a, na onye tọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya.” (John 15:13) Ị maara ihe ịhụnanya bụ ma ọ bụrụ na ị maara Christ.
biko sir, ma ọ bụrụ na ị na-aga regurgitate akụkụ Akwụkwọ Nsọ, ọ dịghị ihe ọzọ i nwere ike ime bụ itinye gị onwe gị na echiche ya. Ọ bụ a akwụkwọ, bụghị a okwu ndu.
ọ • October 3, 2013 na 12:25 pm • zaghachi
Your ahụ na Akwụkwọ Nsọ na-ezighị ezi na ụzọ ị na-eche na ị na-projecting onwe gị dị ka a Christian onye na-adịghị na-eso Bible ma “zoro” ya ma na-ahọrọ na-ebi ndụ site na gị onwe gị koodu na họpụta mmadụ na-ahọrọ ihe, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eso nke ahụ bụ nke Chineke na-banyere….
Ọtụtụ n'ime ihe ị na-azọrọ na ha na-eguzo na-bụ ozizi ugha.
Gabe Taviano • August 19, 2013 na 7:04 Abụ • zaghachi
Nice ịhụ ka ị na ịde blọgụ ebe a Njem! Daalụ maka na-ekpe ekpere maka m na nke a izu, Chineke n'aka adịwo mma.
The crazy ihe banyere unu ga-alụ ka na-eto eto bụ na gị na ntị na anya ya ekechi Chineke ọzọ gị afọ ole na ole karịa ụfọdụ na-emechi Ya anya ruo ogologo oge. Ị maara na Chineke bụ a akụkụ nke alụmdi na nwunye gị dị nnọọ ka unu abụọ na-, na nke ahụ bụ nnukwu. Daalụ maka nkekọrịta!
Madeleine Farrell • August 19, 2013 na 7:04 Abụ • zaghachi
Nke a bụ ihe magburu onwe echiche usoro. M lụrụ di na 17 na di m 19. N'oge anyị abụghị Christian, na kwa, anyị 'ga-eme’ ọdọ. Ka n'ihi ihe ụfọdụ anyị mere. Anyị na-e lụrụ di na nwunye fọrọ nke nta 28 1/2 afọ ugbu a, ndị nne na nna nke 5 na nne na nna ochie nke 2. M hụrụ n'anya ndụ m. Na-agaghị ekwu e nwere oge ndị n'alụmdi na nwunye anyị na otu n'ime anyị dị nnọọ chọrọ pụọ na-abịa azụ, na-agaghị ekwu iwe na iwe abụghị akụkụ nke anyị kwa ụbọchị ndụ a oge, ma ọ bụ na-eche echiche gba mere nnukwu ndudue nke ndụ anyị bụ a echiche usoro. Ma, anyị na-agba mbọ. Na mgbe ịgba alụkwaghịm abụghị otu nhọrọ, Chineke na-eweta na-agwọ ọrịa na oge.
Nwa m nwaanyị lụrụ di na 20 ma ọ dịghị onye na agbamume ọ mgbe nwetara site ndị mmadụ. Ọ ghọtaghị ihe mere ndị na-eche na ọ bụ a ikpeazụ resotu kama a na-adọ ngọzi. Ọbụna n'etiti ndị Kraịst na obodo.
Nwa anyị nwoke na aka nke ọzọ lụrụ di mgbe Christmas oge, na afọ 27. Dị nnọọ ama ahụghị nri girl. Otu ihe.. nri nwata / girl na-aga e nri nwata / girl ọbụna site mgbe ihe siri ike. Dị nnọọ jidesienụ The Cross.
cl • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
Apụghị m ekweta ihe. N'ihi ya, ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na alụmdi na nwunye bụ jogburu onwe na e nwere karịsịa dịghị ihe mere “ngwa ngwa” n'ime ya, ma ọ bụ ihe na Chineke chọrọ iji na-agọzi ma na-edo nsọ anyị. Daalụ maka post!
>> Ma mgbe m lere anya na Scriptures ahụghị m stof ka, "Alụmdi na Nwunye nhata ọnwụ! Ịgbara ya ọsọ!"ma ọ bụ, "Tinye alụmdi na nwunye anya ruo mgbe ị nwere ike ghara itinye ya anya ọ bụla ogologo,"ma ọ bụ, "Naanị-alụ mgbe ị na emewo agadi iji nụ ụtọ ndụ,"ma ọ bụ, "Play ubi maka mgbe na mgbe bulie kasị mma."
nne • December 9, 2014 na 1:48 Abụ • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka nleta m blog – Echere m na m chọpụta na ndepụta adedrss maka ị (M gwa ya na m na-ekwu). Ị nwere a nwa ezinụlọ, N'agbanyeghị! Congrats gị ncheta!
Praisemovement • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
Daalụ maka gị nghọta na maka “na-eme ka Jizọs anya ọma”. Mad ùgwù maka ihe unu livin'and bringin’ otuto Okwu.
Andrea Paige Jackson • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
Nke ahụ bụ a mma àmà. Na ị gwa ya na m na di m iri ncheta! (Anyị lụrụ IRI, ezie.) : )
Jcsmsoul • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
chukwu gozie u nwanne! i maara kpọmkwem ihe ị na-eche ọ bụ ezie na m hụrụ ndị onyenwe mgbe e mesịrị na ndụ na m chọrọ ka m lụrụ Chineke na mmadụ WTF-eguzosi ike n'ihe nye nwunye ya! ndị a dayz ya nnọọ ike na-ahụ na! na ihe ọzọ mere na m atụ anya na-ekpe ekpere m na-alụ na-ahụ na otu onye bụ n'ihi na ị na Na-eche ikpe ọmụma mgbe na-eme ịhụnanya mgbe Ua nwunye! chukwu gozie u!
Jazmin • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu bụghị onye ọ bụla ga-ahụ nwunye dị ka ngọzi. Naanị ndị na-atụkwasị obi ma kwere na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ga-. M ka lụrụ di mgbe a nnọọ obere na na 28 afọ m na di m nwere 3 mara mma ụmụ na ndụ anyị na-lara ife ma na-efe Nna anyị heaven. Alụmdi na nwunye bụ adịghị mfe ezie, o nwere na ọ bụ lee njem ma site na amara na ebere nke Chineke na chụọ àjà ka uche ya na otu onye bụ ike na-eto eto. Daalụ nke ukwuu maka gị ịtụnanya akụkọ ya bụ ezi ngọzi. My Jehova nọgidere na-ekwe gị na nwunye na-eto eto m na-arịọ maka ya amamihe na nke kacha nke ọtụtụ ngọzi gị amara.
Tachy Musica • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
M lụrụ di ka “-eto eto” dị ka nke ọma, na nke a bụ ngọzi, anyị mgbe niile ọnụ (tinyere ada anyị n'ezie), anyị na-eso ihe niile, ma na-enyere onye ọ bụla ọzọ, ụfọdụ ppl na-eche na ọ bụrụ na ị ka ọdọ ka na-eto eto ọ ga-abụ maka a obere oge, ma ekele Chineke anyị na ihe fọrọ nke nta 8 afọ lụrụ di na nwunye ihe ndị kasị mkpa na-agbalị servin’ Chineke mgbe niile…ngọzi
Agopylove09 • August 19, 2013 na 7:05 Abụ • zaghachi
dị otú ahụ dị egwu!! im 25 na ive nọ na-eche banyere ihe niile na-abịa na ịbụ a ezigbo nwunye na n'ezie ido onwe ya n'okpuru na-enwe chi dị ka gị center na-achọ mgbe nile na ndụmọdụ ya maka ya niile na dị nnọọ n'ezie ime ka Kraịst na-edu ndú na-ewu na mmekọrịta na siri ike n'ala nke Kraịst jesus..falling na ịhụnanya na anyị nzọpụta mbụ bụ n'ezie a kwesịrị!! enwe na mmekọrịta chiri anya alllows ị na-eto eto na mara ihe n'anya n'ezie ma na Chineke na-enye na ịhụnanya na ị ga-enye gị ma ọ bụ nwunye.. otú greatful maka onye nzọpụta Ònye na-enye ..<3
Joe Stevens • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Abụ ihe oldee onye ekweta n'ụzọ zuru ezu na Triplee. Ọ bụ ezie na N'ezie ọ bụ dị iche iche ọrịa strok (afọ) maka dị iche iche folks. Na onye ọ bụla ga-ịlụ di na nwunye na Chineke ha-e oge. m 50 yrs ochie, lụrụ m n'obi mgbe m bụ 23 na na ọ bụ 20! ugbu a 27 afọ na 1 ọnwa gasịrị, e nwere na-aga n'ihu (mma) ezimezi oku n'etiti anyị, ka madly na ịhụnanya, kacha mma enyi na-eje ije ọnụ nzube Chineke. Eji afọ m lụrụ maka 6 ọnwa gasịrị! Ma ọbụna m ụmụaka ga-mara ha circumstacces bụ bụchaghị yiri ka anyị, ma ọ bụ Chineke na-timings na atụmatụ ha kpọmkwem otu.
Femi nde • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Abụ ihe oldee onye ekweta n'ụzọ zuru ezu na Triplee. Ọ bụ ezie na N'ezie ọ bụ dị iche iche ọrịa strok (afọ) maka dị iche iche folks. Na onye ọ bụla na-alụ nwunye na Chineke ha-e oge. m 50 yrs ochie, lụrụ m n'obi mgbe m bụ 23 na na ọ bụ 20! ugbu a 27 afọ na 1 ọnwa gasịrị, e nwere na-aga n'ihu (mma) ezimezi oku n'etiti anyị, ka madly na ịhụnanya, kacha mma enyi na-eje ije ọnụ nzube Chineke. Eji afọ m lụrụ maka 6 ọnwa gasịrị!
Reverandjeff • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
M maara onye a niile kwa nke ọma… Dị nnọọ na-eme ememe anyị 13 afọ nke alụmdi na nwunye, na na na 35.. M otu folks-ajụ m ajụjụ ahụ n'otu ụzọ, ma anyị ma dị nnọọ maara na Chineke doro ya na e mere ya. Anyị intersected ọ bụla ọzọ si ndụ na oké mkpa oge ebe anyị bịara ịbụ onye ọ bụla ọzọ arịlịka, na a nkịtị arịlịka nke Christ. The akụkụ kasị mma bụ mgbe anyị na-ohere ịgwa tọrọ ndị mmadụ bụ ndị na-mmekọrịta / alụmdi na nwunye na anyị ga-esi na-agwa anyị ahụkebe àmà !!! Iji kwu eziokwu, nwere ụfọdụ n'ime ndị a mkparịta ụka JPaul ụfọdụ afọ gara aga.. obere ụwa !!! Chineke nyere ndị na-achọ ya na-RIGHT URU Ọ BAARA usoro, na anyị na-abara anyị uru ọgịrịga kama runnin mgbe chickenbones. :)
Jeff Young • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Oh na ọchịchọ ịmata, ịlele anyị na http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Nna m & Mama m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, sweethearts na ha lụrụ di mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ (ma ndị 18 afọ). Ha ka bụ ndị na-eji obi ụtọ di na nwunye ka a na ụbọchị na mgbe na-egosipụta ọ bụla akwa ụta banyere ndụ ha ọnụ. Ịghọ onye toro eto nwere ike malite na alụmdi na nwunye – na na omume gị banyere mkpebi gị enyo mụrụ m. Nsọpụrụ Chineke di na nwunye na-ole na ole na n'ebe dị anya na narị afọ a….Chineke ga-agọzi gị na na-na na ị na-enwe obi ụtọ maka dịkarịa ala 50 ma ọ bụ 60 afọ!
Monique Jolicia • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Ebee bụ nwunye akụkọ?
Jeffreycotton7 • August 19, 2013 na 7:06 Abụ • zaghachi
Ana m ekele gị na nwunye gị nke ukwuu maka-ekere òkè gị akụkọ. na na na 21 na-eche dị ka m na-aga site na fọrọ nke nta otu ọnọdụ. M na-dị nnọọ na nwunye ma. M nwere na mindset nke mere na-eche ma ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ na-na ịhụnanya, ma nke ime mmụọ, mma, okè site ọ bụla ndị ọzọ anya. My girl na doro m anya na anyị na-aga a ga-lụrụ di na nwunye na otu ụbọchị. Ma ọ bụ ezie na anyị abụọ chọrọ ịlụ di, ọ bụ ihe ndị ọzọ nke a lee ya oge; anyị niile na oge na ụwa ụdị onye. M ọzọ nke ihe ASAP anyị na-adịghị kwere nkwa echi ụdị onye. Ya mere, gịnị na-echere? Ọ bụ nnọọ smart girl. Ọ na-echetara m nke nwunye gị na ya akụkọ a obere. Na-eche na ihe nwere ike na-na ụzọ nke ụlọ akwụkwọ na ọrụ ihe mgbaru ọsọ. Ma nke ahụ bụ ihe kwupụta okwu nke ụmụaka mgbe alụmdi na nwunye. Mgbe m na-agwa ya na m na-achọghị ka anyị nwa mbụ nso 30 afọ. Achọghị m ka m ahụ m na-amalite na-adịghị ike n'ihi na afọ, nke ga-eme ka o siere ha ike na ndị ọzọ na-agwụ ike na-egwu gburugburu na m ụmụaka. Achọrọ m 7 na ihe ndị kasị na 3 na dịghị. Ya mere ya mma ka malitere na a ezigbo afọ. Ma m ga-anọgide na-na-agbalị na-ahapụ ya n'aka Chineke na Echegbula onwe gị banyere ya ókè.
aneetarh • August 19, 2013 na 7:07 Abụ • zaghachi
daalụ nke ukwuu Njem n Jess, n onye ọ bụla Hu Dt nyewo ihe agbamume na otu ụzọ ma ọ d oda. Ugbu a, m agaghịkwa atụ ụjọ gettn lụrụ di n'oge karịsịa considern d eziokwu Dt anyị ma Chineke n'anya. Chineke bls u…
Dash • August 19, 2013 na 7:07 Abụ • zaghachi
Jannon Fitzpatrick, Ekwenyere m na Chineke bụ ịhụnanya. The nanị ụzọ isi nweta ezi ịhụnanya bụ na-enweta otu onye kere ịhụnanya. N'etiti ndị anyị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla na caliber gwụla ma anyị na-ekwe ka Chineke na-eduzi anyị ịhụnanya ndụ dị ka nke ọma. “Greater ịhụnanya nwere na ọ dịghị onye karịa nke a, na ọ tọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya” Jhn 15:13. Ịhụnanya na-adịghị na-achọta a onwe afọ ojuju (KevinFerere), ma ọ bụ ịchọta onye pụrụ imeju na-akpali eletriki gboo na ụbụrụ gị. eleezie, gị foto nke “Creation nke Adam” na gị na peeji na-abịa site Renaissance oge bụ mgbe ndị akụziri nke ịhụnanya na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ghọọ ihe n'ihi na onye ụtọ n'agbanyeghị ihe ndị na-eri onye ọzọ. Na sere na ya onwe ya bụ ndị jụrụ okwukwe na-ekwu na Adam bụ iru eru ka Chineke ma akụkụ ya e kere eke. The asusu bụ nke a, Michelangelo na njedebe nke ndụ ya hụrụ ihe o mere na chegharịrị, agbalị mix Christianity na madu (Man ịbụ ọtùtù nke ihe nile). Nke a akụziri nke ịhụnanya bụ ebe a na-m na-eche na ị na-na-abịa site ? nke bụ otu ihe ha na-eme na Greek, Renaissance, na taa omenala. E bụ n'ezie “ihe ọhụrụ n'okpuru anyanwụ”-Solomon, nwekwara si Bible.
Paul Jones • August 19, 2013 na 7:07 Abụ • zaghachi
hey njem lụrụ kemgbe m bụ 22 na 28 ugbu a. dị nnọọ nwere anyị 6 anv. chi nwere agọzi anyị na 4 na-eto eto. i ikpe ekpere ka ọ na-agọzi gị na ezinụlọ gị.
Danz_17unlocked • August 19, 2013 na 7:07 Abụ • zaghachi
Nke a bụ ọmarịcha Njem, Ka Chineke gozie ị na Ua nwunye… na ndị ọzọ pụrụ b gọziri a ^ _ ^ <3
CLL • October 3, 2013 na 12:15 pm • zaghachi
Gịnị a mîkemeke àmà ịdị mma nke Chineke na ihe O nwere ike ime na ndụ na-ata nyefere Ya. Mụ na di m lụrụ na-eto eto (na 24) na dị ka gị na nwunye gị, Chineke hụrụ na o kwesịrị ekwesị iji mee ka anyị ọnụ n'ihi ebube-Ya. Nwa anyị lụrụ di na nwata, afọ 20 tupu afọ a…ikwoozu :-) o maa achọtawo ezi ihe na ya na-asọpụrụ Chineke na nwunye. Anyị chọrọ ihe ọ bụla ọzọ n'ihi na ya na ọ bụ ngọzi.
Karenda • October 3, 2013 na 12:18 pm • zaghachi
Nso akwa isiokwu! Mụ na di m lụrụ di na-eto eto dị ka nke ọma, m 22 na di m 25. Anyị Ememme 15 afọ nke alụmdi na nwunye. Jesus, emewo ka anyị dịkwuo n'otu dị ka a di na nwunye na afọ, akụziri anyị “ịnwụ onwe anyị” iji mma ịhụnanya na-eje ozi ọ bụla ọzọ. Ịchọ ọdịmma onwe bụ ọnụ ọgụgụ otu mbibi nke ọtụtụ alụmdi na nwunye na.
Daalụ maka gị ịdị njikere elu n'ihu na-eme ihe n'eziokwu banyere isiokwu nke alụmdi na nwunye dị ka ọ na-akọ ka Akwụkwọ Nsọ!
Michael • October 3, 2013 na 1:16 pm • zaghachi
My na nwunye m lụrụ di na nwunye 21 dị ka nke ọma, na na bụ 11 afọ na 6 ụmụ ago (bio / nakweere / nkuchi). M na-amaghị na m bụ “etorubeghị” ịlụ di na nwunye, M nnọọ maara na ọ bụ onye m na-achọghị ibi ndụ na-enweghị! Chineke adịwo mma.
AJ • October 3, 2013 na 2:16 pm • zaghachi
Agụ n'etiti edoghi: anyị hụrụ n'anya Jesus na anyị agụụ mmekọ.
M na-ahụ na nke a mee mgbe niile n'etiti ndị Kraịst na-eche na arụmụka dị otú ahụ dị ka ndị a na-agba egwu gburugburu n'ezie na-akpali na-hilarious. Ọ ga-enwe mmehie dị nnọọ nwere mmekọahụ, ya mere, ọ bụ dị anya mara iji ọsọ gbaba a na ndụ nkwa.
Clara • October 3, 2013 na 2:21 pm • zaghachi
The Chineke na malitere na Marriage ghaghi ịhụ gị site na ya niile. Ị bụ ihe agbamume na-eto eto Kraịst na-eto eto na di na nwunye na Njem. Chukwu gozie gị!!
JOB • October 3, 2013 na 2:52 pm • zaghachi
M lụrụ di na afọ 21 na n'otu afọ dị ka ị njem Lee, na 2009. M zutere ya na chọọchị mgbe m bụ 16 afọ na anyị anọwo na ọnụ maka fọrọ nke nta 8 afọ ugbu a. Anyị na-efe Chineke na AYCM ministri, iru eru ka obodo nta na-ekere òkè na okwu Chineke na Philippines. Anyị gwara onye ọ bụla ọzọ kwa ụbọchị “M hụrụ gị n'anya n'ihi na m na-ahụ otú ihe ị hụrụ Chineke n'anya”. M na-adịghị mgbe akwa ụta na-arịọ ya maka ya n'aka-ya, na nwunye. The gara aga 4 afọ nke alụmdi na nwunye kemgbe a ngọzi.
THATMAN • October 3, 2013 na 2:55 pm • zaghachi
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< bụ bụ A Ihọd?? akpa ọchị
Isaac • October 3, 2013 na 4:06 pm • zaghachi
Okwu Chineke bụ n'ezie onye kasị elu. Ilu 18:22 o doro anya na-akpata nke a.
”Onye chotaworo nwunye achotawo ezi ihe, na obtaineth ihu ọma nke ndị Lord''.
My na-ahụ n'ihi na onye chọrọ ka ọdọ bụ mbụ na-arịọ maka nduzi Chineke na-ahọrọ nri onye. Anyị dị ka ụmụ mmadụ shouldnt ga-eji aka na forcifully jụọ Chineke ka ọ gọzie ya. kama, anyị ga-atọgbọ na ngụkọta nrubeisi, iru eru maka Chineke na amara na-arịọ maka nduzi na-eso nduzi ya maka ndụ anyị.
SteveMcMillon • October 3, 2013 na 4:40 pm • zaghachi
M na-akwanyere a ukwuu!! Ya mere na-agba ume n'ihi na m nwere a chọrọ ka di na nwunye kemgbe m bụ 6 yrs ochie na alot of ndị mmadụ na-etinye m ala n'ihi na o. N'ọtụtụ ụzọ ya kere obi erughị ala na m. Daalụ ọzọ n'ihi na nke a!
Terri • October 3, 2013 na 4:59 pm • zaghachi
A obere ihe karịrị 35 afọ gara aga m lụrụ m ụlọ akwụkwọ dị elu n'obi. Anyị abụọ 18, fọrọ nke nta 19. Anyị nwere ọtụtụ naysayers na papa m ọbụna na-ele anya m ga na-gbara alụkwaghịm na-na-ahụ a na dọkịta. Mgbe Chineke na-eme ndokwa a alụmdi na nwunye na ọ dịghị mkpa bụ ihe afọ na nwunye. ọtụtụ ngọzi!
Missy • October 3, 2013 na 6:01 pm • zaghachi
M na-lụrụ di na nwata dị ka nke ọma (20 na-kpọmkwem). ugbu a, na 32, M na-eche na ị nwere ike lụrụ di na nwunye ọ bụla e nyere afọ na mgbe ọ bụla e nyere n'oge na onye ọ bụla… na Chineke ga-eji a onye na hụrụ n'anya Ya na bụla ọnọdụ isere onwe Ya nso na onye… niile ị ga-abụ dị njikere-adị nsọ dị ka ọ dị nsọ. Ọ bụ ya mere na anaghị m kwere na e nwere “onye”… Ọ bụla na-ahọrọ ka ọdọ, ibu “onye ahụ” maka eachother :)
Missy • October 3, 2013 na 6:02 pm • zaghachi
ma N'ezie nke a bụ naanị ma ọ bụrụ na ha abụọ bụ ndị kwere ekwe
Johnny • October 3, 2013 na 10:27 pm • zaghachi
Daalụ nke ukwuu. Mụ na nwunye m nwere ụdị akụkọ a. A enyi posted a taa na ọ bụ ihe dị m mkpa. Toonụ Onyenwe anyị Jizọs!
Lise • October 3, 2013 na 10:39 pm • zaghachi
Daalụ maka isiokwu a! m 36 afọ na m na a lụrụ di 19yrs…yep, m 17 mgbe m lụrụ m 18yr ochie di! Anyị nwere isii ụmụaka, n'anya Jehova, na-enwe nnọọ obi ụtọ :) anyị na-jụrụ ajụjụ ndị yiri ya mgbe niile na mgbe ọ pụrụ ịbụ a na-ewu ewu nhọrọ ma ọ bụ nhọrọ ziri ezi n'ihi na ọtụtụ, M nnọọ obi ụtọ na obi kwa ụbọchị na anyị mere nhọrọ ziri ezi n'ihi anyị.
Steffan • October 3, 2013 na 11:18 pm • zaghachi
Nke a bụ ihe ịtụnanya. M maara ọtụtụ ndị na-eche na nke a bụ nnukwu ndudue nke ndụ gị. m 22 na n'ezie e-ewere nke a na onye na amaara m na hụrụ n'anya ebe ọ bụ na m sophomore afọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. M n'aka ihe na-adịghị anwụ na rainbows maka ị, ma ọ bụ ka m na-atụ anya na ọ ga-m. M na-aja gị maka iwepụ niile nke negativity na-achọ na ibu picture na ihe ị ghọtara na Chineke na-edu gị. Ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọzọ bụ mgbe obi ụtọ n'ihi na ị na, M n'ezie bu.
Kim Hunter • October 4, 2013 na 8:30 Abụ • zaghachi
M zutere di m na 14 anyị lụrụ mgbe m bụ 21 na ọ bụ 23 na anyị anọwo na ọnụ maka 22 afọ di na nwunye 15 nke ndị 22 ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na-alụ na-eto eto ya otú a onye na-ele ndụ….n'ihi na n'ezie gị lifr bụ ihe ị na-eme ka ọ….na ee m na di m na-echekwa ma kwere na chi na anyị na-ebi ndụ anyị maka ya na chi ihe niile kwere omume karịsịa a ogologo healthly n'anya alụmdi na nwunye ọ bụla mfe ma na chi gị nwere ike ime ka ọ na…….-agọzi!!
aha: Gịnị mere m ka ọdọ ka na-eto eto? - Alaeze Cakers Alaeze Cakers
Cherisse • October 4, 2013 na 9:43 Abụ • zaghachi
Gịnị a ngozi imata Chineke na ịghọta ya okwu. M na-achọ na e nwere ihe ndị dị ka. Ekwela ka Ekwensu kụda gị mmụọ. Anyị maara na ọ bụ n'ebe nile.
GrantYoung • October 4, 2013 na 12:44 pm • zaghachi
Mụ na nwunye m lụrụ di mgbe anyị nọ 22 na m nwere otu ahụmahụ. Friends na a zọpụtara na-azoputaghi chọrọ ka m mara na m nwere ihe ndụ. My na-akpụ isi chetaara m niile clubbing na partying m nwere ike ime. My “nso” enyi kọwara na e nwere ndị ọzọ azù nke oké osimiri inyocha. Ọfọn, anyị n'ezie lụrụ gburugburu otu oge 3 ọzọ di na nwunye na afọ ole anyị mere! Anyị na-na na a nta ma maa bụghị naanị na ọ na-agba ume icheta na.
Chineke amara anyị Ememme 3 afọ na ọ meela egwu! Daalụ maka nkekọrịta Njem!
Mark • October 4, 2013 na 4:24 pm • zaghachi
My na-ahụ ga-abụ na ọ bụrụ na ị na-aga ka ọdọ ka na-eto eto, ị ka mma mata ihe na-eme otú. Ọ bụ nnọọ ike ọbụna ihe ndị kasị mma nke ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere na-arụ ọrụ ahụ kasị sie ike gị na mgbe na-arụ ọrụ na-kpam kpam àjà na-emeso na nza nke ndakpọ olileanya na obi mgbawa, adịghị banye maka ya. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na i nwere ike na-atachi obi (na ụfọdụ ndị na-eme) ma ọ bụrụ na ike na-akwụghachi ụgwọ na mgbe ụfọdụ.
Kevin • October 4, 2013 na 5:42 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a Bible dabeere n'ọnọdụ. Ọ bụ obere n'etiti American Christian, ebe omenala na-elekọta mmadụ na owuwu nwere mgbochi di na nwunye, ịhụ a-eto eto, ọbụna onye meworo okenye ka, nwere ndị dị otú a ụmụnna tozuru okè na-ele na uru nke Chineke alụmdi. Dabere na ọtụtụ n'ime ndị ihe m na-agụ, a lee ya anya na-ada ka mba ọzọ ka ndị mmadụ, ọbụna Church n'ihi na anyị na-na-ekwe anyị onwe anyị na-adabere n'ebe ndị na-elekọta mmadụ norms nke ụbọchị kama Baịbụl eziokwu nke ihe Chineke na-esetịpụ na-kpọrọ na-akpakọbara. Ikpe ekpere maka unu Njem, na-ekerịta Gospel na eziokwu nke okwu Chineke mere bara uru na ezigbo na kwere ekwe ndụ.
PastorRob • October 5, 2013 na 6:55 Abụ • zaghachi
Achọrọ m ka ị mara Njem- Lee m lụrụ di 2 ọnwa mgbe m tụgharịa 21. Bụ Chineke niile na ya? Ndi Ọ nile nọ na ya n'agbanyeghị ndị mmadụ chere na echiche ha na-na ihe mere m ji na-ekwesịghị ịlụ di m mkpa ichere. Onye nke Chineke m di na nwunye ruo 16 afọ ugbu a na 2 Mma ụmụ agbọghọ na m juputara greatful Chineke maka a Chineke na-maara ihe, kwesịrị nsọpụrụ dị oké ọnụ ahịa ọla. The mma banyere gị na-agba akaebe na-ya-a bu n'ihi na ị na-agwa ya!!!
aha: Single v. lụrụ di na nwunye… | Pụtara Life
Mavis • January 28, 2014 na 10:10 Abụ • zaghachi
M nwere ndụmọdụ maka niile na-eto eto. Ọ bụrụ na ị na- 18 ma ọ, amalite na-achọ a na nwunye! Sex n'èzí ma ọ bụrụ na alụmdi na nwunye ga na-ewetara gị ihe ọ bụla ma obi mgbawa, leaness nke mkpụrụ obi na ihe ọjọọ ahụ ike, uche na nke anụ. Di na nwunye bụ ihe ọṅụ na ụba na booster! Ị nwere ike nweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere ma na-enwe lufe ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị nọghị naanị gị. Nne na nna gị eleghị anya gbara alụkwaghịm n'ihi na ha emeghị ihe ha obi na nwata ha! M na-adịghị ohere ịkọwa ya niile, ma unu na-ewu na-mated. Malite na-eme yor ndepụta ga nwere àgwà ozugbo na ịlụ di na nwunye na-eto eto mgbe i nwere n'obi gị dum na-enye. m 53 na nnọọ grayeful ka obi ụtọ n'alụmdi na. M na-lụrụ di na nwunye 31 -obi gbawara ọtụtụ ugboro na nza ma ọ bụrụ na egbughị eto eto na-uzọ n'uzọ akaha. Olileanya mere ọ bụrụ na ị ga-abụ ihe amamihe dị na nwata gị na-enwe na ya ịnọ na ya!
GOSPELMAGDOTCOM • February 6, 2014 na 8:33 Abụ • zaghachi
Ezigbo Njem Lee,
Anyị nwere obi ụtọ na-agụ gị isiokwu.
Nwere ike ị na-enye anyị ikike ịsụgharị gị isiokwu n'ime french na-ebipụta ha na website anyị: gospelmag.com?
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu gị azịza.
Best na Christ,
ebere • February 15, 2014 na 3:14 pm • zaghachi
My enyi zụtara m akwụkwọ a mgbe anyị na-eto eto banyere ịbụ a-eto eto, ùgwù Christian nwaanyị. N'ezie ọ ume-eche ruo mgbe alụmdi na nwunye na ihe niile ma nwere amaokwu nile. Ọ kwuru na ọ na ada ya elu onwe ya na Chineke adịghị achọ ka anyị na-ụbọchị. M mere a nkwa onwe m na m ga-ókè na ụmụ okorobịa (Echere m na m fọrọ nke nta ka m kpam kpam na outgrowing ime ihere). M ga-azọpụta ihe ụfọdụ maka alụmdi na nwunye ma na gbanyụọ gara aga 2 afọ m na enwetatụbeghị dara mbà n'obi. Na-adị m owu. M na-eche ihe na-ezighị ezi na m na ọ bụrụ na m mma. M. Amaghị m ọ bụla na amaokwu Bible. M mkpa ịmụ a otutu ihe. M na a na-agbalị na achọghị m ga-esi mara nnọọ ọ bụla okorobịa n'ihi na m nwere ike na-na obi gbawara na o nwere ike-eduga m n'ebe a ụzọ Chineke achọghị m ala ma m ga-esi owu. Ọ bụ mgbe niile mara mma na-ahụ ndị ọzọ na-eto eto na ịhụnanya. Ọ bụ ọbụna mma ma ọ bụrụ na ha na-lụrụ di na nwunye m na ọ bụ adịghị mma na-ekwo ekworo ma na onye ọ bụla na-ekwu, “oh, ọ ga-abịa n'oge unu oge”. M na-eche banyere ya mgbe nile n'oge na-adịbeghị. M zutere a n'ezie dị mma Ihọd. Anyị nwere nnọọ yiri mmadụ ma o kwuru na ọ dịghị-aga chọọchị. O kwuru na ya kweere na Chineke ma na m maara m na ọ bụghị zuru okè onwe m ma m nwere ike ọ gaghị enyere ma na-eche n'ihi na anaghị m na-eche na ọ na-na-achọ Chineke ma ọ bụrụ na m na-aga na-akwa ụta na ihe. Women na-adịghị azọrọ na-agbalị na-agbanwe ndị mmadụ ka m nụrụ. Ọ na-eduga ná ndakpọ olileanya na e weere. Ọfọn, Ike gwụrụ m nke nchere. Echere m na m ga-amụta n'ụzọ siri ike. M na-adịghị enwe mmekọahụ ezie. na na na 23 ma ka na-eguzosi ike na na ma m mgbagwoju anya mere na anaghị m kwesịrị a di ugbu a. Onye ọ bụla ọzọ na-akawanye ihe ha chọrọ. Ọ bụ otú manụ na m nwere ike ịkwụsị na-eche banyere ụmụ okorobịa. M oké ịda mbà n'obi mgbe ụfọdụ,. Ọ bụrụ na m ịlụ di na nwunye a Ihọd na ọ gbanwere anyi ga na unequally kekọtara? Ụfọdụ ndị nwere ihe niile. Na m na-ekwu ego. Naanị ihe m chọrọ onye m kpọrọ. Ọ bụ nke ukwuu na-akọwa.
Natalie • March 11, 2015 na 1:21 pm • zaghachi
Ị ka bụ nanị 23! :) Echegbula onwe gị banyere bụghị ịchọta “nri” otu, e nwere ọ bụghị naanị otu onye si n'ebe na bụ a ezi nhọrọ. Na dị nnọọ ka ihe doo: Unu dị oké ọnụ ahịa IT. E nwere ihe mere na ị bụ na ị na n'ụwa a n'oge a. Ị dị oké ọnụ ahịa Jizọs, dị na-agụ na-ekwu na nkwa o kwere ya mgbe ị na-amalite na-eche na ị na-adịghị uru ọ. My mmasị bụ: “M gaghị ahapụ gị ma ọ bụ gbahapụ gị.”
Onye m maara na nso nso gbara alụkwaghịm, na a na nnukwu nke na alụmdi na nwunye ha bụ na ọ bụ onye kwere ekwe ma ọ bụghị. A mkpebi ị ga-eme ga- “bụ Chineke kwesịrị ya?” Na-achọ Jehova obi gị nile, ọ ga-eduzi gị. Ọ ga-eduzi gị. Ọ ga-enye agbamume dị gị mkpa mgbe ị na-eche ọnụ ma dara mbà n'obi. Ihe m hụrụ nnọọ aka bụ na-agụ Akwụkwọ Nsọ n'olu dara ụda tupu m gaa bed, na karịsịa mgbe m na-eche ala n'okpuru agha si iro. Gị mgbe ihe Chineke nwere dị gburugburu akuku.. ma ọ bụrụ na naanị ị na-eche. Amaara m na ọ na-ada ka ike na-eme ihe n'eziokwu, manụ, ma ọ bụrụ na ị ga-anọgide na-achọ Jehova, Ọ ga-egbo ị na nke a oge. E nwere ihe mere na ị na-na oge! Ị maghị otú Chineke ga-eji ya dị ka a na-agba akaebe na-enyere ndị ọzọ na-eto eto ụmụ agbọghọ ndị na-enwe otu ihe! :) M anya na a nyeere n'ụzọ ụfọdụ! ngọzi!
tshireletsopreciousntumo • November 7, 2014 na 2:43 Abụ • zaghachi
Nke a bụ ihe m kwesịrị ịnụ, na-ekele gị na Chineke na-agọzi
Micheala • March 22, 2015 na 8:32 Abụ • zaghachi
M lụrụ di na 21 na na ọ bụ mara mma …
I nwere ike ọ gaghị enyere onye ị na-ada na ịhụnanya na-ma ọ bụ mgbe ị na-ada na ịhụnanya na ha,
Ọ dịghị mgbe m chere na m ga-abụ ụdị ịlụ eto eto na-atụ uche si na “fun ihe” na ndụ .. Ma, anaghị m na-eche m mere, M nnọọ na-akọrọ m “fun ihe” na onye m hụrụ n'anya na chere ndụ enweghị.
Gisselle • March 28, 2015 na 7:41 Abụ • zaghachi
Hi m Gisselle m si Honduras. na na na 18 afọ na enyi m nwoke bụ 19. anyị zutere 15 ọnwa gara aga na chọọchị ya dị na New York! M na-ebi Honduras.. Ya mere, ọ kemgbe a anya mmekọrịta. M na-n'afọ nke abụọ m na mahadum na otú dị ka ọ na. Anyị na-ekwu banyere ịlụ di na nwunye. Na ụfọdụ ndị ikwu anyị na ndị okenye si chọọchị ya na-akwado anyị ma na-agwa anyị bụ ihe kasị mma ime. M ka obi erughị ala banyere ya.. Mama m na-adịghị kwa-emeghe banyere m ịlụ di na nwunye ka na-eto eto na otú dị ka ụmụnne m ndị nwanyị. Anyị na-ekpe ekpere ebe ọ bụ na anyị mbụ chere banyere alụmdi na nwunye dị ka a ga-ekwe omume. Ọ bụrụ na i nwere ike ide m m email i ga-enwe obi ekele!
Jennifer • July 8, 2015 na 3:11 pm • zaghachi
Anyị lụrụ 21 afọ ndị gara aga. m 19 na di m 21. Anyị dọtara nso onye ọ bụla ọzọ na Chineke. Atọ ụmụaka e mesịrị, anyị na-atụ anya na-esote 20.
Charles • August 9, 2015 na 11:07 pm • zaghachi
M nnọọ chọrọ ikwu na-ekele gị maka na ncherita-iru ụzọ ị ekwusa Gods okwu. M nnọọ na-ele 'Fallin’ music video mgbe a ụbọchị nke ụzọ ụkwụ na ọnwụnwa na-eche na Chineke kwuru okwu nri n'ime ihe m na-aga site na. Ịtụnanya Onyinye nke Grace na anyị na-apụghị ịtụ atụ ma ọ bụ a tụrụ. Daalụ nke ukwuu maka re-asaghe anya m na ihe mere foundational na m ije na Chineke. M na-ekpe ekpere ka Chineke ga-agọzi gị n'ozi gị.
Chidera • August 18, 2015 na 2:48 pm • zaghachi
Ozugbo Chineke na-egosi na ị na onye na mmadụ nwere otu ahuhu n'ihi na Chineke ka ị na njikere na-eje ije na ị ụzọ niile. ọ dịghị mkpa bụ ihe afọ, ozugbo oge na-abịa na ị lụọ. The ihe na-dị nnọọ ịnakwere ya na niile nke gi nile, ọ ga-eme ka ụzọ gị kwụrụ ọtọ (Ilu 3:6). Dị nnọọ nwere agụụ mmekọahụ na ịhụnanya maka Chineke, na nri oge ọ ga-enye gị gị helpmate onye ga na-eguzo na gị site na ya niile. Emela wanna akụkụ, mgbe na-adịghị eme na Chineke. Na nile nke gi nile ịnakwere ya, he'ell ka ụzọ gị kwụrụ ọtọ.
Stacy • December 14, 2015 na 3:57 pm • zaghachi
My di 3/4 nwa na a nkeji iri na ise na-acha ọcha.(Adị m ọcha). My di m lụrụ di na-eto eto nwekwara m 18 aga 19 na di m 20. Ndị mmadụ gwara anyị ghara, anyị nọ na-eme a ndudue na gēzite ịgba alụkwaghịm. Anyị na-adịghị ege ntị anyị lụkwara na ugbu a anyị anọwo 16 afọ. Ọ bụ Chineke na-achịkwa.
jaysmith • March 12, 2016 na 7:34 pm • zaghachi
Kevin–o yiri ka ị dị ka i nwere ihe ole na ole ala. Na ị na-arụ ọrụ ụzọ gị elu. Na-aga, nwa ewu! N'ikpeazụ, mara onwe gị ọkara ka nke ọma bụ ọtụtụ ndị vattle, n'agbanyeghị adịghị emezi emezi. ngọzi!
TheRealHonestTruth • March 27, 2016 na 2:44 pm • zaghachi
Nke ọma maka ndị si n'ebe na e gọziri agọzi na nnọọ Ezigbo chi na NO nsogbu ahụ ike na ihe niile na di na nwunye na ezinụlọ na a otutu ego na-enwe ọtụtụ ihe ga-enwe nnọọ ekele maka ebe ha n'ezie kwesịrị enweghị ihe mere mkpesa mgbe ọtụtụ n'ime anyị na-adịghị na kechioma na niile bụ ezie na ọtụtụ ndị ị na-lụrụ di na nwunye bụ nnọọ nwata nke e nwere ọtụtụ ị na-ka ọnụ taa.
Tye Smith • June 26, 2016 na 9:55 pm • zaghachi
nnọọ akọ ọ bịara elivate mara ụlọikwuu na fraịdee 24/6/2016
RachelSanchez • November 2, 2016 na 1:14 pm • zaghachi
Mụ na di m lụrụ di tupu afọ a. ọ bụ 22, na m 21. M na jụrụ niile mere m ga- “otutu m na-eto eto pụọ” ma ọ bụ ya mere m ga-ọbụna na-eche banyere ịlụ di na nwunye na mahadum. M ihe ijuanya na-kasị ọjọọ ihe si ndị inyom ndị tọrọ yiri ka na-eleda m. Ọ na-agbawa obi na ndị ọzọ nwere ike na-aghọta na m n'ezie n'ezie ụtọ na nwata na m kasị mmasị mmadụ na ụwa. Ọ bụ mwute mgbe ndị mmadụ (ọbụna okenye ọgbọ) na-eche na ọ bụ n'ụzọ zuru okè mma n'ihi na ndị mmadụ na ha 20s ụra gburugburu, ma mgbe ha na-alụ, ọ bụ-awụ akpata oyi na jọgburu. Anyị nnọọ olileanya anyị alụmdi na nwunye nwere ike na-akpali ndị ọzọ na-itu ukwu mgbe ha na-eche njikere, n'agbanyeghị ihe mmadụ na-agwa ha.
The Nnọọ mwute Eziokwu • November 27, 2017 na 8:09 Abụ • zaghachi
Mgbe ahụ, e nwere ọtụtụ n'ime anyị mma otu ndị na-n'ezie na-enwe olileanya izute a ezigbo nwaanyị dajụọ na, ma dị mwute ikwu na ọ ka na-adịghị mere maka anyị. Ma n'ihi na ndị ikom na ndị inyom na ndị nnọọ oké gọziri agọzi ka zutere ibe na nwere ezinụlọ nke unu nwere nnọọ ọtụtụ ihe na-enwe ekele maka.
alvina.reborn • January 3, 2018 na 2:39 pm • zaghachi
Ekele alot Njem. N'ihi na afọ m na e-agwa onwe m na m nwere ike na-na-alụ n'oge gara aga a na-afọ. Ma ugbu a, m maara mma.